ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ - GAME OVER - Afrikhepri Fondation
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 30, 2021
ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ - GAME OVER
Qဦး ထုပ်ပြင်သစ်မီဒီယာနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဖြစ်ပျက်သလဲ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် မှစတင်၍ အာဖရိက၌ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရထားထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးသစ်သားမီးဖိုနှင့်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်မည်လော။
စိန်ရောင်းဝယ်သူ Giscard d'Estaing မှပေါ်ထွက်လာသော Emmanuel Macron အထိပြင်သစ်စကားပြောအာဖရိက၏နေအောက်တွင်ဘာမျှမပြောင်းလဲခဲ့ပါ။ နိုင်ငံရေးနှင့်စက်မှုအထက်တန်းလွှာများသည်မျက်မြင်မရသောလက်အောက်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အခြားသူများသေဆုံးခြင်းအပါအ ၀ င်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုရေတိုအကျိုးအမြတ်နှင့်သာယာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာကြသည်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရုတ်တရက်ပညာတတ်များမငြိမ်မသက်ကြည့်ပါ။ သူတို့၏ "ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်" သည်အနောက်အာဖရိကရှိနိုင်ငံများထက်ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုသည် "သူတို့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချုပ်အခြာအာဏာကိုအသုံးချပြီးသူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကို Auvergne ရွာChamalières (... ) မှာပုံနှိပ်ခဲ့တယ်။ " ထို့ကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ "ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး" အုပ်စုကို လွတ်မြောက်မှုကို, အမည်ရစင်မြင့်တစ်ခု "Françafriqueအဆုံးသတ်ခြင်း" (1) ။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းဤဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များမှမစ္စတာချီမီနာအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအားသူလူသိရှင်ကြားရှုတ်ချခြင်းကိုရပ်တန့်စေခဲ့ခြင်းမှသူ၏တရားဝင်ထောက်ခံမှုကိုကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်ကြလိမ့်မည် အထူးသဖြင့် BFM ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကဆွေးနွေးငြင်းခုံစဉ်ကာလအတွင်း CFA ဖရန့် (၂)
ဇူလိုင်လ 2018 ခုနှစ်, သည် L'Express ကို Quai d'Orsay တွင်အနောက်အာဖရိကတာဝန်ခံလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း Laurent Bigot နှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ “ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်လောက်ကြာမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကူအညီကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လာတယ် [အာဖရိကပြည်နယ်များသို့] လူများကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှတားဆီးရန်အဖြေမှာရှိ၏ သို့တိုင်၎င်းသည်ရှုံးနိမ့်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 'ဆင်းရဲသားတွေဟာဘယ်တော့မှတစ်ယောက်တည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး' ဟုပြောသောသတိမဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်မှဖြစ်စေ၊ အမျိုးမျိုးသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်ဖြစ်စေဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်ဖြစ်စေငွေကြေးလှူဒါန်းသူများကဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ IMF နှင့်ဘဏ်တို့၏မဟာဗျူဟာများကိုကြည့်သောအခါ ကမ္ဘာကြီး, ငါတို့ stratosphere ၌ရှိကြ၏! "
Montaigne Institute …
အဖြေရရန် Montaigne Institution မှထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အရာများကို ဦး စွာလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ပြသရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ၎င်းသည် Jean-Louis Borloo ၏နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်သည်။ - XXI တွင်အာဖရိကသည်လျှပ်စစ်လိုအပ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်e ရာစုနှစ်နှင့်တိုက်ကြီးအရှိဆုံးဇိမ်ခံဟိုတယ်များတွင်မြောက်မြားစွာသောထိပ်သီးအစည်းအဝေးများကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် Emmanuel Macron ၏တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ပေါ်လစီကိုပျက်ပြားစေရန်သင်္ဘောမှထွက်ခွာခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ရေ။
Montaigne Institut သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အကုန်ပိုင်း၌ Claude Bébéarမှတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Laurent Bigorgne မှ "လုံးဝလွတ်လပ်ရေးအတွက်" ဦး ဆောင်ညွှန်ကြားသည့်အကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ 2000 ခုနှစ်တွင်သူသည်ခေါင်းစဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေခဲ့သည် "ဒီနေ့အာဖရိကအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ" (3) ။
ဤအစီရင်ခံစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နိုင်သည်“ အာဖရိကနိုင်ငံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များ၊ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးများအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အချိန်တန်ပြီ” ပြင်သစ်နှင့်အာဖရိကအကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍“ ဘာသာစကားဒြပ်စင်” ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သတိပြုမိလာသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ထက်လက်တွေ့ကျသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တကယ့်ကတိက ၀ တ်များပါဝင်သည်။ အာဖရိကသည်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီများအတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးသည်။ ၏ဤမိန့်ခွန်း ပြန်စတင်သည် စွမ်းအင်များကိုလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီများအားအာဖရိကစျေးကွက်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမြှင့်တင်ရမည်။ "
၂၀၁၇ ဇွန်လတွင် McKinsey အစိုးရအဖွဲ့မှထုတ်ဝေသောအာဖရိကသို့တရုတ်၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အလွန်ကောင်းသည့်အစီရင်ခံစာကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်သတိပြုပါ "ခြင်္သေ့နှင့်နဂါး၏ကခုန်" (၄) (ခိုင်လုံသောအချက်အလက်များကြောင့်ရရှိသောအတွေးအခေါ်များကြောင့်လည်ပင်းကိုလိမ်ခဲ့သည့်နေရာ) Montaigne Institute ၏အစီရင်ခံစာသည်ရှုပ်ထွေးမှုကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ထို့ကြောင့်အခန်း ၁.၂: "ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းအတွက်အာဖရိက", သူကခေါင်းစဉ်: "မှာ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲလား၊ ကြွေးလား။ " ဤတွင် Montaigne Institute ကအနောက်နိုင်ငံများတွင်တရုတ်၏စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အသစ်များကိုပဲ့တင်ထပ်ကာအာဖရိကနိုင်ငံများနှင့်အကြွေးတင်နေသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် (5) ။ IMF၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ AFD တို့၏ပေါ်လစီများစသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရသောအခါစိတ်ပျက်မိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးပြီးနောက်တွင်အကြွေးတင်နေသည့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောနိုင်ငံများ (PTTE) ကိုသတ်မှတ်ရန်အယူအဆသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြပြီး ၄ င်းတို့၏လေးပုံသုံးပုံသည်ဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ အများစုမှာကံအားလျော်စွာဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်စကားပြောဇုန်အတွက်!
စင်စစ်အားဖြင့် BRICS နှင့် China One Belt ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူ One Road အစီအစဉ်သည်အာဖရိကနှစ်ဘက်စလုံးပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ "ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ" နှင့်ဆက်စပ်သောတောင်းစားခြင်းနှင့်တင်သွင်းခြင်းတို့၏ယုတ္တိဗေဒ။ ယခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၃ ရက်နေ့တွင်တရုတ် - အာဖရိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေး (FOCAC) သည်ဘေဂျင်းတွင်အာဖရိကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ၅၄ ခုသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အကြီးအကဲများကိုစုရုံးရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဆရာဝန်များနှင့်တောင်သူလယ်သမားများအားသင်တန်းပေးခြင်း၊ အာဖရိကမှထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်များတင်ပို့မှုအတွက်အထောက်အပံ့များနှင့်အလိုအလျောက်ကားများနှင့် ပတ်သတ်၍ တရုတ် - အာဖရိကပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်ကိုသူအတည်ပြုခဲ့သည်။ - အစားအစာမလုံလောက်ခြင်း။
ပြင်သစ်ဆောင်းပါးတွေဘာကြောင့်များစပြီးဘာကြောင့်စတာလဲဆိုတာကိုတော့နားလည်သွားပြီ တရုတ်ကအာဖရိကတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၆၀ ဖိုးကြေငြာသော်လည်းပြင်သစ်ကကြေငြာသည်။...) "? (၆)
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ AFD ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်Rémy Rioux သည်ပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူကသူကြေငြာသည့်အခါမိမိကိုယ်ကိုဝန်ခံသည်မဟုတ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တရုတ်မှာမေးခွန်းရှိတယ်၊ ငါတို့ကဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒမှာပါဝင်တယ်။ ? ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် "တရုတ်စုပေါင်းဂိမ်းပူးပေါင်းနေကြသည်။ သမ္မတကမကြာသေးမီကပြောကြားခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရာသီဥတုနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကိစ္စရပ်များတွင်ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်မှုကိုကာကွယ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစီမံကိန်းတွေဘယ်လိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုရှာဖို့မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ အဲဒါကကျွန်မတို့ရဲ့အိမ်ကိုပေးအပ်တဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက် ဦး တည်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "။
၁၉၇၀၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင်ယူနက်စကိုမှတည်ထောင်ခဲ့သော“ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ” သည် OECD နိုင်ငံများမှစုစုပေါင်းအမျိုးသားထုတ်ကုန် (GNP) ၏ ၀.၇၀% ကိုအလှူဒါနပုံစံဖြင့်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီးနာယက "။ ပြင်သစ်သည် AFD မှတစ်ဆင့် GNP ၏ ၀.၃၇% သာယူရို ၈ ဘီလီယံ၊ အာဖရိကတိုက်တွင် ၄၀% သာပါဝင်သည်။
ယနေ့ Gabon ၌ဥပမာအားဖြင့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်အေဂျင်ဒါအားအစိုးရမှချေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ AFD အားတရားစွဲဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သတင်းစာမှာတော့ သည် Le Monde စက်တင်ဘာလ ၁၈၊ ၂၀၁၈ (၇) အရ“ ၁၂ ဘီလီယံတန်သောသူ” ရေမီရီဆိုသူကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ချစေခဲ့သည် ဒီဘီလီယံဟာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးခရက်ဒစ်နဲ့အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များကိုပေးအပ်ရန်သမ္မတနိုင်ငံကဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုအသစ်၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ODA သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ငွေ၏ ၀.၅၅% သို့တိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသင့်သည့်လမ်း၏ပထမခြေလှမ်းသာဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ် ၀.၃၈% ရှိရာ၊ "ကျနော်တို့ကအံ့သြစရာမရှိဘဲအဲဒီမှာလေ့လာသင်ယူ" AFD သည်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်အစိုးရတစ်ရပ်လုံးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဤ ဦး စားပေးအသစ်၏ကိရိယာဖြစ်သည် "ပြီးတော့နောက်ထပ်" တိုးတက်မှုကိုလုပ်ရမယ်” ဒါပေမယ့် "AFD ပွင့်လင်းသည် "။
ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အတွက်မစ္စတာ Rioux ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် " အာဖရိက၏သယံဇာတတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ဂျီဒီပီ၏ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့်ယူဆောင်လာသည့်ကြွေးမြီသည်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများထက်အလွန်နည်းသည်။ "။ ဒါပေမယ့်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ကြွေးမြီတွေရဲ့သဘောသဘာဝကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့အတွက်သူ့ကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နောက်ဆုံး (၉) တွင်ပြည်ထောင်စု (၂၀၁၁) ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်စု၏ပြည်ထောင်စုမိန့်ခွန်းတွင် (၉) က Jean-Claude Juncker ၏စာသားများကိုပြင်သစ်နှင့်ဥရောပတို့၏ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်များကဖော်ပြသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၆ နှစ်တာကာလအတွင်းကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။ သူရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲပြောခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကြီးမြတ်။ မြင့်မြတ်သောတိုက်ကြီးနှင့်၎င်းနိုင်ငံအသီးသီးရှိနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်။ အာဖရိကနှင့်ဥရောပအကြားရှိဆက်ဆံရေးကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများကိုသာလှူဒါန်းခဲ့သည့်အလားမကြည့်သင့်တော့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောချဉ်းကပ်မှုမလုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့အရှက်။ အာဖရိကသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုမသိဘဲ၎င်းအားထည့်သွင်းရန် ကော်မရှင်သည်အာဖရိကနှင့်ဥရောပတို့အကြားမဟာမိတ်သစ်တစ်ခု၊ ရေရှည်တည်တံ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အလုပ်အကိုင်များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုအဆိုပြုနေသည်။ ဤမဟာမိတ် - ကျွန်ုပ်တို့မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း - လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းအာဖရိကတွင်အလုပ်အကိုင် ၁၀ သန်းအထိဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ »
အလေးအနက်ထားပြီးခိုင်ခိုင်မာမာပြောဆိုကြပါစို့။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ခိုင်မာသည့်စီမံကိန်းများကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီအတွက်ဂျီဒီပီ၏ ၀.၇% ရည်မှန်းချက်ကိုဥပဒေတွင်ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်သစ်အရွယ်အစားနှင့်၎င်း၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။Benoît Hamon ကမည်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကိုမျှဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဘဏ်စနစ်အားအမှန်တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုဘဲရန်ပုံငွေကမ္ဘာကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။
ထို့ကြောင့်အချိန်သည်အပြောင်းအလဲအတွက်ခိုင်မာသောအချက်ပြရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ AFD အစားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ပူးပေါင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ကြီးဌာနကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်အဓိကအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများဖြစ်သောရေပေးဝေရေးတွင်အပြန်အလှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ်လစီဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆူဒန်နိုင်ငံ Jonglei တူးမြောင်း၊ Great Green Wall၊ DRC ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ AFRICARAIL စီမံကိန်း၊ အာဖရိကမြို့တော်များနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားသည့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများ၊ ရေကန်ကြီးများနှင့်ချိတ်ဆက်သည့်တူးမြောင်းများ။
အာဖရိကအချုပ်အခြာအာဏာပေါ်ပေါက်လာဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပအာဏာရှင်စနစ်များမှလွတ်မြောက်ပြီးမဟာမိတ်များကို ရွေးချယ်၍ အခြေအနေများကိုပြimp္ဌာန်းနိုင်သည့်အတွက်အာဖရိကသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကံကြမ္မာ၏စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မည်။
SébastienPérimony, စက်တင်ဘာလ 24, 2018
အားလုံးတစ်ခုဖြစ်သည် - Ellâm onru (အသံ)
စစ်ပွဲ၏ကြောက်မက်ဖွယ်၏ psychart ကုထုံးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု
အာဖရိကအမျိုးသမီးများအစည်းအရုံးကဒီဆုကိုအာဖရိကဖွားဆု ၇ ခုကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်
ပါရမီရှင်သူသည် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင်တက္ကသိုလ်သို့ပြန်ခဲ့သည်